STA-taxane Mashiinka Faahfaahinta Farsamada -Wuxi Daya Technology Co., Ltd.
80Ton & 110 Ton C Frame Single Point Servo Sax Punch Press
Majiro istaroog xamuul ah daqiiqadii siibiyeha
Habka lulid ku habboon
U dhiganta istaroogga buuxa
Dhuunta qoto dheer
5.2.1 astaamaha qaabdhismeedka guud I
(1) Lagu dhisay qaababka wax soo saarka 9, badeecad kastaa waxay dooran kartaa wareegga ugu habboon ee wax soo saarka qaybaha, Marka si loo gaaro hufnaan sare iyo saxnaan sare.
(2) Marka loo barbardhigo feerka dhaqameed, qaabdhismeedku waa mid fudud, waxtarka gudbinta farsamada waa mid sareeya, kharashka dayactirka ayaa hooseeya
(3) Marka loo eego sifooyinka badeecada / sheyga, xawaaraha sameynta feerka waa la yareyn karaa inta lagu guda jiro howsha, si loo gaaro xawaaraha sameynta ugu fiican ee alaabada / sheyga. Si loo yareeyo gariirka, loo yareeyo buuqa shaabad, la hagaajiyo saxnaanta alaabada lana dheereeyo nolosha adeegga dhimashada.
(4) Marka loo eego badeecooyin kala duwan iyo dherer kala duwan, garaaca feerka ayaa loo dejin karaa si aan macquul ahayn, taas oo si weyn u gaabinaysa waqtiga ku dhufashada isla markaana hagaajinaysa waxtarka.
Lagu dhisay qaababka wax soo saarka 9
5.2.2 astaamaha qaabdhismeedka ugu muhiimsan 2
Mashiinka ugu muhiimsan